IGRANITE FIRE PIT (ISIKHOKELO SOYILO) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle IGranite Fire Pit (Isikhokelo soYilo)
IGranite Fire Pit (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sokuyila somgodi wegranite somlilo esigubungela imibuzo ethandwayo kunye neengcebiso zokusebenzisa ilitye elihle lendalo kwiyadi yakho yangasemva.
Ikhonkrithi kunye nezitena ezilinganiswe ngomlilo ziindidi ezimbini zezinto ezisoloko zicingelwa xa kufikwa kwimingxunya yomlilo. Nangona kunjalo, umgodi womlilo wegranite ungabonakala ukhangele kwaye unike indawo yokuhlala yangaphandle yendlu yakho idizayini ekhangayo. Apha ngezantsi siza kugubungela imibuzo emininzi ebuzwa rhoqo malunga nemingxunya yomlilo yegranite ukunceda ukugqiba ukuba bakulungele na.
Ngaba unokusebenzisa igranite emngxunyeni womlilo?
Kutheni usebenzisa i-granite emgodini womlilo?
Ngaba umlilo uya kutyhoboza i-granite?
Uwenza njani umbane wegranite?
Ividiyo ngendlela yokufaka umngxuma womlilo wegranite
Igranite ebunjiweyo yommandla womlilo
I-Granite yinto ehlala ixesha elide ingasetyenziselwa ngokukhuselekileyo Uyilo lomngxunya womlilo . Kukhetho olukhulu emngxunyeni womlilo kwaye iintlobo ezininzi zegranite zinokusetyenziswa.
Iindidi ezidumileyo zibandakanya iibhloko zegranite, igranite etyunyuziweyo, okanye inyengane ebolileyo enokusetyenziselwa zonke iindawo zalemingxunya yomlilo. Sebenzisa ngaphezulu kohlobo olunye wamkelekile ngokupheleleyo.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, inyengane yomelele kakhulu kwaye inomdla ngokwasemzimbeni. I-Granite inikezela ngeendlela ezininzi zokukhetha kunye neendidi ezahlukeneyo zemibala kunye neepateni ezinokuthi zikhethwe. Kunye noku, ubungakanani kunye nokumila akunayo imida emininzi nokuba. Oku kwahluka kwenza ukusetyenziswa kwegranite kukhetho oluphezulu.
I-Granite yinto enhle kakhulu, eyenza kube lula ukufumana amanzi kunye nokuqhuma xa kushushu. Oku kubalulekile xa kuziwa kwimingxuma yomlilo, njengoko ingaphandle xa kukho amathuba emvula kunye neminye imozulu. Xa ufaka umlilo emhadini ukuze usetyenziswe, kubalulekile ukuba ungabikho manzi ukuphepha iimeko eziyingozi.
Sebenzisa igranite njengezinto ezikwindawo yomlilo kunika izibonelelo zokusebenza. Iibhloko zeGranite ziya kuhlala zipholile xa uyisebenzisa. Ke ukuba umntu uthe wangena ngengozi kuyo, abayi kuzitshisa.
Granite uqobo ukumelana umhlwa, ukuqhekeka, kunye bala. Ikwakhusela iindawo ezijikeleze iipatio kule micimbi ngokunjalo, ukugcina ulondolozo kule ndawo iphantsi kakhulu. Ukongeza, iindawo zomlilo zegranite zihlala zomelele kakhulu, oko kuthetha ukuba isidingo sokutshintsha sinokuphantsi kakhulu.
I-Granite ayiqhekeki phantsi kwamaqondo obushushu aphezulu. Indawo yokunyibilika kwegranite eyomileyo yi-1215 ukuya kwi-1260 degrees Celsius (2219 ukuya kuma-2300 degrees Fahrenheit). Umlilo, kwiorenji ukuya kuluhlu olutyheli (ekunokwenzeka ukuba ungene emlilweni) malunga ne-1100 degrees Celsius (2012 degrees Fahrenheit).
Ukwenza umngxuma womlilo kunokwenziwa ngamanyathelo ambalwa. Oku kushwankathelwe ngezantsi.
Okokuqala, bamba indawo yendawo yomlilo oyifunayo. Oku kufanele kube ziimitha ezi-5 ubuncinci ububanzi kunye nee-intshi ezi-6 ubunzulu ubuncinci. Oku kunokuba kukhulu. Lo mngxunya kufuneka uzaliswe ngegrabile okanye ngesanti, ukuvumela ukuba kuphume amanzi ngamaxesha emvula.
Okwesibini, khetha ilitye lendalo umphezulu wombala kumbala kunye nobukhulu obunqwenelekayo. Ezi zihlala ziya kuba ziibhloko.
Okwesithathu, iibhloko ziya kuthi emva koko zibekwe zijikeleze umngxuma owombiweyo ngesangqa esiwujikelezileyo ukuze wakhe umlilo. Ukugcina oku kubalulekile kubalulekile nokuba kukwinqanaba. Iziqendu ezininzi ziya kubekwa zide zifike phezulu emngxunyeni nakwindawo engaphandle efunwayo.
iilokhwe ezimnandi zokunxiba emitshatweni
Okokugqibela, kwindawo ejikeleze umlilo kuya kufuneka izaliswe ngesanti okanye igrabile ukuthintela naziphi na iimpembelelo ezimbi ezingeyomfuneko ezivela kwizinto.
Nazi iintlobo ezahlukeneyo zegrabile enokusetyenziselwa le nto. I-ertyisi ye-ertyisi yinto edla ngokusetyenziswa ejikeleze umngxuma womlilo njengoko ingabizi mali, kulula ukuhamba kuyo kwaye ibukeka buhle.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ungabeki naluphi na uhlobo lwezinto ezinokutsha xa udibana namalangatye. Iindidi ezithile zamatye, zegrabile okanye zesanti zisenokuvutha okanye ziqhume xa kushushu kakhulu.
Ukuba ufuna ukubeka umgca ezantsi komhadi womlilo okanye isitya sesinyithi kucetyiswa ukuba usebenzise kuphela izinto ezilinganiswe ngomlilo ezinje ngamatye e-lava okanye iiglasi ezithile zelava ezenziwe ngale njongo.
Xa usenza umngxuma womlilo kubalulekile ukukhangela iikhowudi zalapha ekhaya ukuqinisekisa ukuba kuvunyelwe ngokufanelekileyo ukugqibezela olu hlobo lomsebenzi. Ukongeza kubalulekile ukuphanda indawo eyiyo yomhadi womlilo wegranite onqwenela ukuwenza.
Eminye imiba yokujonga inokuba ziipatheni zomoya, nayiphi na imithi ekufutshane okanye izihlahla, ukuba ikufuphi kangakanani na ekhayeni, nokuba iza kusetyenziswa njani. Ukumisela zonke ezi zinto kwangaphambili kunokukhawulezisa inkqubo yokuvumela kunye nokugcina iintlungu zentliziyo zokutshisa into ongakhange uyenze.
Ukucwangcisa indawo yokuhlala ngeenxa zonke okanye kufutshane nomlilo kungakhokelela ekusetyenzisweni ngakumbi kunye nomlilo ongcono. Oku kunokuzisa imeko yokhuseleko kunye nobunkunkqele. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu izimvo zepatio zamatye .
Yintoni igranite ebolileyo? Igranite ebunjiweyo yigranite eye yaqaqanjelwa yaza yaxhonywa yade yaqhekeka yaziziqwenga ezincinci. Oku kuyakwenza isiqwenga esithambileyo, esingaphantsi komqolo.
Ngaba inyengane etyunyuziweyo yahlukile kunegranite ebolileyo? Igranite etyunyuziweyo iya kuba bukhali kwaye ichazwe ngakumbi. I-granite ebolileyo, njengoko kukhankanyiwe ngasentla, yeyendalo, yiyo loo nto yenza iimilo ezingaphezulu eziphilayo ezinemiphetho ethambileyo.
Ngaba i-granite ebolileyo iyabiza? I-granite ebolileyo ayibizi njengeziqwenga ezinkulu, okanye inyengane etyunyuziweyo. Kungenxa yokuba inokuphinda isetyenziswe kwakhona okanye isetyenziswe kwakhona xa kuthelekiswa neqhekeza elitsha lenyengane. Ezi zinto zihlala zibiza malunga ne-40 ukuya kwi-50 yeedola.
Bona eminye imifanekiso Uyilo lwegrabile yegrabile Apha.
Iiponti ezi-2 zoMlambo iiLitye, amaTye, uD yangaphandle ... $ 12.95 umthengisi ogqibelele (657) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UMzantsi-ntshona weBoulder kunye neLandscape De De ... $ 29.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-141 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Uniflame WAD1009SP I-oyile iRubbar yangaphandle… $ 140.96$ 169.95 umthengisi ogqibelele (124) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Indawo ekubhalwe kuyo iRanger Ranger yangaphandle yoMngxunya woMlilo… $ 229.49$ 269.99 yeedola umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-348 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
iinwele zomtshato zeenwele ezinde ezineqhiya
ilokhwe yomtshakazi emfusa nomnyama